सञ्चारकर्मि एच.आर.को तिजको गित बजारमा « Tulsipur Khabar
सञ्चारकर्मि एच.आर.को तिजको गित बजारमा
तुलसीपुर, ९ साउन । गायक तथा मोडल एच. आर. मगरको पछिल्नो गिति एल्वम ब्युटि व्युटी बोलको तिज गित वजारमा आएको छ । २०७३ सालको तिजमा मेरो बारुली कम्मर भाच्ने गरायो भन्ने गितबाट पहिलो पटक मोडल गरी सांगितिक क्षेत्रमा यात्रा सुरु गर्नु भएका मगरले अहिले आफैले तिज गित बजारमा ल्याएका छन । सन्चारकर्मी समेत रकेका एच.आर.लाई गायीका श्रीदेवी देवकोटाले साथ दिएकि छिन ।
“रातो रातो साडीमा भईछेउ सारै व्युटी ,
नाच्दा र गाउदा तिमिले तिजैमा हुन्छ मेरो डयुटी” भन्ने तिज गितको शब्द र लय संगितकार अमरनाथको रहेको छ ।
गएको तिजमा ”मेरो बारुली कम्मर भाच्ने गराय” भन्ने गितमा पहिलो मोडल गर्नु भएको थियो । त्यसपछि दोस्रो पटक “गौ छरेको जौ भयो” रोईला गितमा मोडल गर्नु भएको थियो । सल्यानको गर्पा घई हाल तुलसीपुर ५ संगित नगरमा बस्दै आएका एच.आर.ले तेस्रो पटक अहिले भर्खरै आफनै स्वरमा तिजको गित बजारमा ल्याएका छन । उनले तिज गितमा स्वर दिनुका साथै मोडल पनि गरेका छन । मोडलमा उनलाई लोसिना एल.सी.ले साथ दिएकि छिन ।
वि.स. २०५४ सालमा सल्यानमा जन्मनु भएका एच.आर.ले गोरखा माध्यमिक विद्यालय तुलसीपुर बाट कक्षा १२ को परिक्षा दिईसकेका छन । पढाई संगै सांगितिक क्षेत्रलाई पनि आगल्दै आएको तुलसीपुर खवर लाई उनले बताए ।
सानै देखिको रुचि अहिले आएर पुरा भएको उनको भनाई छ । साथै अहिले बजारमा आएको तिज गित सवैले अडियो सुनेर र टि.भि.,युटयुबमा भिडियो हेरेर सहयोग गर्न उनको आग्रह छ । उनि रेडियो प्रकृति एफ.एम.तुलसीपुरका कुशल कार्यक्रम सञ्चालक समेत हुन ।